FulfillPanda ikambani yakazvimiririra yekudonhedza kambani iyo inonyanya kupa kupa yakakwira yepamusoro yakavanzika mazita ekudonhedza mabasa. Vashandi vedu vane ruzivo vanogona kukubatsira iwe nekutsanangudza kutsvaga uye kunyora zvinhu zvako zvekudonha. Iwe unogona kuwedzera kutengesa kwekudyara uye kudzoka nekutengesa izvi zvakaganhurirwa-edition zvigadzirwa pasi peako wega brand.
Chii Chinonzi Yakavanzika Chita Kudonhedza?
Yakasarudzika label kudonhedza inzira umo mugadziri anogadzira chigadzirwa chemutengesi icho chinozongotengeswa chete pasi peye maricho emutengesi. Zvinhu zvakadaro zvichaiswa mukati memugadziri weako kudonhedza mhando. Nekuda kweizvozvo, zvinhu zvese zvinotengwa neyakovatengi kuburikidza nekudonhedza kwako kana ecommerce bhizinesiichave yakanzi ndeyako. Yakavanzika label kudonhedza ine kugona kuvandudza kutengesa uye mibairo kuburikidza neakadai akasiyana mabhenji.
Zadzisa Panda ichakubatsira iwe kutora chako chaunoda zvinhu sosi uye zvakavanzika unyore iwo. Zvichadarowedzera kutengesauye simudza ROI nekutengesa izvi zvakasarudzika zvinhu mu brand yako. FulfillPanda inoshanda mukupa yekutanga-mwero yakavanzika mazita ekudonhedza masevhisi.
Isu tinobatsira makambani anodonhedza ekumisikidza mabhenji avo nekuendesa zvakasarudzika, pane-zvinoda zvakavanzika chitaridzi kudonhedza masevhisi kuFulfillPanda. Tinoda kushandisa kumaka kuti tibatsire iwe kuvaka rako bhizinesi. Zvinhu zvako zvinodonhedza zvakavanzika zvakanyorwa uye zviwanikwe kune vako vatengi pasi pezita rako rechiratidzo. Nekuda kweizvozvo, isu tinogona kukubatsira iwe kuvandudza yako yekumaka nzira uye zvishoma nezvishoma kukura bhizinesi rako.
Yedu Chigadzirwa Sourcing & Yekuvandudza timu inokwanisa kukubatsira iwe kutsvaga zvakakodzera zvinhu, vagadziri, kana mafekitori. Kuti tive nechokwadi chehunhu hwechigadzirwa, vashandi vedu vatinovimba vanozoongorora yakaomarara mhando. Isu tichagadzira chigadzirwa mockup pamwe neakakodzera zvakavanzika zvinyorwa zvekumiririra yako brand. Kugadzirwa kwekutevera kunozobatwa neyedu mhando yekudzora timu. Izvi zvinobatsira mukuona kuti zvinhu zvese zvakagadzirwa zvinowirirana uye zvinogutsa zvirevo zvemhando yekutanga.
Tichatarisira zvese zvinoenderana nekugadzirwa kwechigadzirwa kutevedzera. Nekutenderwa kwako, vashandi vedu vacharonga kuti zvive zvechokwadi sampuli, mapikicha, uye mavhidhiyo aunofanira kupihwa.
Unogona kuvaka bespoke kurongedza uye zvakavanzika chitaridziyako yekudonhedza zvinhu neFulfill Panda. Nyanzvi dzedu dzichashanda newe kugadzira mabhegi uye kurongedza zvine chiratidzo chekambani yako. Iyi inyanzvi nzira yekukwezva uye kusiyanisa vatengi vako.
Isu tinogona zvakare kukubatsira iwe neyekuverenga manejimendi. Pachinzvimbo chako, tinochengeta zvinhu zvako zvakavanzika zvine zita munzvimbo yedu yakachengeteka mahara. Saizvozvo, isu tinokupa iwe iyokugona kuteedzera uye kubata rako rezvinhu munguva chaiyo. Kunyange zvakadaro, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti chako chekutengesa chakachengeteka panzvimbo yedu.
Kugutsa zvinodiwa nevatengi vedu uye vatengesi, FulfillPanda inopawo kuendesa kwepasirese uye dzakasiyana sarudzo dzekuendesa. Unogona kusarudza nzira yekutumira inonyatsoenderana nezvinodiwa nekambani yako.
Nei Uchizadzisa Panda?
Tiverengere iwe mukati kana iwe uri kutsvaga kuti ugadzire yako yega mhando uye zvine hungwaru gadzirisa yako yekupakata.
Iwe haumbofi wakanyara pamberi pevatengi vako. Sokunge kuti ndeyedu, tinobata zvese zvine hungwaru uye nekukoshesa.
Taura nesu ipapo!